Endoscopy Miaraka amin'ny rafitra fakan-tsary
Volam-bozaka mpandinika biolojika
Tselatra jiro mikraoskaopy
Ophthalmatic Sela takamoa
Welch allyn heine ent takamoa
Bolibola Endoscope Xenon
Jiro am-bava nify LED
Jiro birao LED
Jery ​​jery horonantsary mpitsabo
LED jiro sy labozia fitsaboana
Jiro mandeha amin'ny fandidiana
Jiro fanadinana ara-pahasalamana
Jiro OT LED
Fahazavana OT Mobile
Tokana dome OT Light
Ny tolakandron'ny 16 martsa 2020, tonga tao Nanchang maikere Medical Equipment Co., Ltd. ny mpitarika ny Minjian Qingshanhu.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-18
Ny tolakandron'ny 16 martsa 2020, tonga tao Nanchang maikere Medical Equipment Co., Ltd. ireo mpitarika ny Minjian Qingshanhu mba hitsidika sy hahatakatra ny toe-javatra iain'ireo orinasa miverina miasa sy mamokatra aorian'ny valan'aretina Xinguan. Eo ambany fitarihan'i Chen Fenglei, ge ...
Nitsidika ny mpitarika ny injeniera sivily Qingshanhu hianatra momba ny famerenana ny asa sy ny famokarana orinasam-pikambana
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-09
Ny tolakandron'ny 16 martsa 2020, tonga tao Nanchang maikere Medical Equipment Co., Ltd. ireo mpitarika ny Minjian Qingshanhu mba hitsidika sy hahatakatra ny toe-javatra iain'ireo orinasa miverina miasa sy mamokatra aorian'ny valan'aretina Xinguan. Eo ambany fitarihan'i Chen Fenglei, tale jeneralin'ny Nanchang ...
Ka ny coronavirus dia azo vonoina amin'ny jiro ultraviolet
Manohitra ny valanaretina! Ho lasa hetsika iraisan'ny vahoaka manontolo amin'ny Fetiben'ny Lohataona ny taona 2020. Taorian'ny niainany «rakotra» sarotra hita sy nokosehin'i Shuanghuanglian sy vazivazy hafa, nifantoka tsikelikely tamin'ny jiro famonoana otrikaretina UV ny vondron-tsakaizanay. Ka novela coronavi ...
Fakan-kevitra maimaim-poana 18979109197
Adiresy No. 666, Yaohu West 5th Road, Changdong Town, Faritra fampandrosoana teknolojia avo lenta Nanchang, Jiangxi, Sina
Jiro nify, Jiro mandeha amin'ny fandidiana, Jiro fanadinana Halogen, Jiro fanadinana ara-pitsaboana, jiro fanadinana ny rindrina, Jiro halogen ho an'ny mpandinika biokimika,